1950 को वसन्तमा एक धेरै असामान्य कला प्रदर्शनी कोलोगा को शानदार शहर को नजिकै खोल्यो। यो कलुगा क्षेत्र मा एक कचरा संग्रहालय हो, जो सबैभन्दा पहिले र केवल रूस मा। यो असामान्य स्थान कहाँ छ, यसको संग्रहमा कुन प्रस्तुतिहरू उपस्थित छन्, र यो कुन भ्रमणमा रुचि राख्नेछ?
रूसमा बेसारको पहिलो कला संग्रहालय
आधुनिक व्यक्तिले दैनिक कचराको कचरा बनाउँछ। केही स्वामीहरूले छोटो सामग्रीबाट शिल्प बनाउन खोज्छन् , र होशियार नागरिकहरूले प्रशोधनको लागि अपशिष्ट हात पारे। यद्यपि, ठूला शहरहरूमा अनुकूल अनुकूल पारिस्थितिक परिस्थिति कायम राख्न यी प्रयासहरू पर्याप्त छैनन्। कला कचरा स्पेस सिर्जना गर्ने विचार रचनात्मक डिजाइनर "बुउरो" को समूहको बीचमा पुग्यो। रचनात्मक व्यक्तिहरूले प्राय: नयाँ सिर्जनाका लागि केही प्रकारका जंक सामग्रीहरू छोड्छन्। यसैले यो यो अवस्थामा भयो। डिजाइनरहरूले कचरा रिसाइकिलिंगको बारेमा मात्र सोचे, जो विभिन्न रोचक चीजहरूको सम्पूर्ण ह्याण्डर संकलन गरेको छ जुन "यो फ्याट आउट गर्न दयालु छ।" यस समस्याको समाधान रचनात्मक थियो: कला वस्तुहरूको संग्रहमा जंक गोदाम बदल्न। यो कचौरा संग्रहालय कलगागा क्षेत्रमा देखा पर्दछ।
सबैलाई रद्दीटोकरीबाट सिर्जना गर्न सक्दछ!
आजसम्म, संग्रहालयको संग्रहमा सय भन्दा बढी प्रदर्शनहरू छन्। यी उपयोगी घरबार वस्तुहरू र कला वस्तुहरू हुन्। परियोजनाको लेखकहरूले आफ्नो कचरा संग्रहालय कलगुगा क्षेत्रमा स्नेहपूर्वक फोन गर्छन्: "म्यू मा" - पूरा नामको पहिलो अक्षरको लागि छोटो। एक्सटेन्सनले 1000 मीटर2को क्षेत्रमा राखेको छ र विषयगत क्षेत्रहरूमा विभाजित छ। संग्रहको गौरव प्रसिद्ध डिजाइनरहरूको काम हो। यो नायर लुईवा प्याकर, तात्टा ओभिन्निकोवा, स्टेनस्लाव गमोज्कोव, लेन्टी ओजर्निकिकव र अन्य धेरै हो। छिमेकीमा मान्यता प्राप्त मालिकहरूको कामको साथ, तपाईं साधारण मानिसहरूको शिल्पहरू देख्न सक्नुहुन्छ जुन जंक सामग्रीबाट रचनात्मक काममा संलग्न छन्। संग्रहालयमा प्रत्येक आगन्तुक प्रस्ताव र प्रदर्शनीको उपहारलाई तिनीहरूको आफ्नै काम गर्न सकिन्छ। प्रदान गरिएको छ कि तिनीहरू सामग्री बनाइएका छन् जुन धेरै आधुनिक व्यक्तिले रद्दीटोकरीमा बाहिर निकाल्न हिचकिंदैन।
कलुगा क्षेत्रको झुकुस्कोस्सी जिल्लामा कचौरा संग्रहालय न केवल रचनाकारहरूको रचनात्मकता हो, तर समाजलाई पनि एक आदर्श सन्देश पनि। विस्तारको मुख्य लक्ष्य दर्शकलाई आधुनिक पारिस्थितिकीको समस्याबारे सोच्नु हो। "फोहर" संग्रहालयका प्रदर्शनीहरूले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि कचरा आकर्षक र उपयोगी हेर्न सक्छ। यसको अतिरिक्त, रचनात्मक व्यक्तिहरूको लागि गैर-कोर सामग्रीसँग काम गर्ने रुचिको धेरै विचार हो। कलगुगा क्षेत्रमा कचरा संग्रहालय बोरिंग पारिस्थितिक प्रदर्शनीलाई बुलाउन सकिँदैन। अपशिष्ट बनेको कला वस्तुहरू भौतिक संरक्षण, प्रतिष्ठानहरू र अन्तरक्रियात्मक मनोरञ्जनमा जानकारीको साथ संयुक्त रूपमा संयुक्त हुन्छन्।
संग्रहालयमा प्रत्येक वस्तुको नजिक त्यहाँ यसको विस्तृत वर्णन भएको कार्ड हो। प्रदर्शनी यहाँ धेरै फरक देख्न सकिन्छ: एक ड्रम सेट, एक पूर्ण आकारको मोटरसाइकल, खजूरको रूख प्लास्टिकको बोतलबार र एक "निर्दोष घरको घर" बाट बनेको छ। अतिथिहरु को कल्पना को मलबे को इंटरैक्टिव ढेर, "चिकमोर" कोठा र जीवन को आकार वाला मोडेल हेलीकाप्टर द्वारा चकित छ। प्रत्येक वस्तु वा स्थापना धेरै लामो समयको लागि हेर्न सकिन्छ। कलगुगा क्षेत्रमा कचौरा संग्रहालय अनूठा छ कि यसको प्रदर्शन न केवल सौंदर्य दृष्टिकोण देखि नै दिलचस्प छ। आगन्तुकहरू जस्तै स्वतन्त्र रूपमा निर्धारण गर्न सकिन्छ जसबाट यो वा त्यो मूर्तिकला बनाइन्छ। संग्रहालय फोटो-क्षेत्र र अतिरिक्त मनोरञ्जन प्रदान गर्दछ। विस्तार को उजागर बलहरु संग एक ठूलो पूल हो, जसमा तपाईं तल को तल देखि टगल ट्रम्प को तल जा सकते हो। संग्रहालयका आगन्तुकहरूले पनि एक रोमाञ्चक क्वेस्टमा भाग लिन सक्छन्, दर्पण लेबेरियन पास गर्नुहोस् वा एक रस्सी पार्कमा ट्रयाक गर्न सक्छ।
संग्रहालय कसरी प्राप्त गर्ने?
कलगागा क्षेत्रमा कचौरा संग्रहालय कहाँ छ, यो रोचक विस्तार कसरी प्राप्त गर्ने? अपशिष्टबाट बनाईएको कला वस्तुहरूको संग्रह हेर्नुहोस्, तपाईं जुकुस्कोस्सी जिल्लामा हुन सक्नुहुन्छ। संग्रहालय व्यवसाय पार्क "Grachi" को क्षेत्र मा स्थित छ, यो संघीय राजमार्ग को 41 किमि किलोमिटर छ A-108। निकटतम सम्झौता Istye को गाँउ हो। यदि तपाईं निजी कारबाट यात्रा गर्नुहुन्छ, त्यहाँ पुग्ने सबै भन्दा आसान तरीका नेभिगेटर द्वारा छ। संग्रहालयको सही समन्वय: 55.123576, 36.825026। तपाईं सार्वजनिक यातायातमा जान सक्नुहुन्छ, सबैभन्दा सुविधाजनक विकल्प बस "सर्पखोभ-ओबिनिंक" हो। व्यापारी पार्क "Grachi" को नजीक बन्द गर्न को लागी ड्राइभरलाई सोध्नुहोस्। धेरै यात्री यात्रीहरू ए-108 मोटरमार्फत ओबिनिस्क र कलुगाबाट चल्छन्।
दर्शकहरूको लागि जानकारी
कलगुगा क्षेत्रमा कचौरा संग्रहालयसँग अतिथिहरूको लागि कामदार कार्यक्रम पर्याप्त छ। शुक्रबार, शनिबार र आइतबार, तपाईं एक्सप्रेस 11.00 देखि 17.00 सम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रारम्भिक रेकर्डिङ आवश्यक छैन, टिकटहरू प्रवेश गर्न सकिन्छ। एक हप्तामा एक व्यक्तिगत वा समूह भ्रमण को आदेश, तपाईं, कर सकते हो संग्रहालय को प्रशासन संग व्यक्तिगत सम्झौताको। वयस्कों को लागि प्रदर्शनी को दौरा लागत बच्चाहरु र पेंशनरों को लागि 200 rubles, 150 rubles। कृपया ध्यान दिनुहोस्: केही प्रदर्शनहरू हातमा छुट गर्न निषिद्ध गरिन्छ, जबकि अरू विपरीत, सक्रिय अनुसन्धानका लागि विशेष गरी सिर्जना गरिन्छ। गलत गल्तीहरूबाट बच्नको लागि, जानकारी प्लेट सावधानीपूर्वक अध्ययन गर्नुहोस् र प्रदर्शनीका कर्मचारीहरूलाई सम्पर्क गर्न संकोच नगर्नुहोस्। कलगुगा क्षेत्रमा सम्पूर्ण परिवारको कचराको भ्रमण गर्न निश्चित हुनुहोस्! विस्तारको ठेगाना सम्झन सजिलो छ: संघीय राजमार्गको 41 किमि किलोमिटर A-108। "माउ म्यू" लगातार विकास हुँदैछ, हालैमा एक नजिकैको क्याफे स्वीकार्य मूल्यहरु संग संग्रहालय को नजिकै खोलिएको थियो। प्रदर्शनी आफ्नो प्रदर्शनीहरु लाई नयाँ प्रदर्शनों र आकर्षण संग खुश गर्न को लागि जारी छ।
रूसी मान्छे को परम्पराहरु
को खेलाडी outfit गर्न स्की जूता
भियतनाम देखि सुनगाभाहरू: हेरविचार को सुविधाहरू। सुनगाभा कसरी रोपेर गर्न
अवलोकन एडिडास miCoach सेन्सर र समीक्षा
कसरी आफ्नो आफ्नै हातले moonshine तामा बनाउने?
Fastboot मोड मोड: यो के हो
महिला फैशन ब्लाउज: समीक्षा, मोडेल र समीक्षा
घरको लागि खेलकुद कोने। बालबालिकाका लागि खेलकुद परिसर
Aphorisms Kozmy Prutkova र आफ्नो अर्थ। सबैभन्दा छोटो aphorism Kozmy Prutkova। Kozma Prutkov: विचार, उद्धरण र aphorisms